कसरी चलाउने सामाजिक सञ्जाल ? - Naya Patrika
कसरी चलाउने सामाजिक सञ्जाल ?
काठमाडौं | मङि्सर ०४, २०७५
सकेसम्म आफ्ना पोस्ट चिनेका साथीले मात्रै हेर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्छ । सार्वजनिक हुँदा फरक नपर्ने विषयलाई मात्र सार्वजनिक तवरले राख्न सकिन्छ ।
स्मार्टफोन र इन्टरनेट डाटा सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन थालेको हालसालै हो । धेरैको पहिलो इन्टरनेट अनुभव स्मार्टफोनमा फेसबुक रहन पुगेको छ । हामी र हामीभन्दा अघिल्ला पुस्ताले इमेल चलाएनन्, अन्य वेबसाइट पनि चलाएनन्, हामीले सीधै मोबाइलमा फेसबुक चलायौँ, हाम्रो अनुभव पृथक् रह्यो, हामीले इन्टरनेट र सुरक्षाबारे नबुझी सामाजिक सञ्जाल चलायौँ । इन्टरनेटको बनोट, यसका सुरक्षा चुनौती आदि विविध पाटाबारे नबुझी चलाउँदा केही दुर्घटना हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ उल्लेख गर्न लागिएका सुरक्षा चुनौती सामाजिक सञ्जाल प्रचलित हुनुभन्दा पहिले पनि थिए, र अहिले पनि छन् । अतः सामाजिक सञ्जालका साथसाथै इन्टरनेटमा अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
एकाउन्ट ह्याक भएको धेरै सुनिन्छ । फेसबुक, ट्विटर जस्ता कम्पनीको सर्भरबाटै हाम्रा पासवर्ड चोरी भइरहेका छन् । यस्ता चोरी भएका पासवर्ड ‘डार्क वेब’ (दुई नम्बरी, कालाबजारी भनेर बुझ्दा हुन्छ) मा किनबेच हुन्छन् । सामान्यतः यस्ता चोरी भएका पासवर्ड बलिया हुन्नन्, या भनौँ सजिला किसिमका शब्द हुन्छन् । हामी धेरै एप तथा साइट चलाउनेहरू सामान्यतया एउटै पासवर्ड सबै एकाउन्टमा प्रयोग गर्छौं । हरेक खाताका लागि अलग–अलग पासवर्ड सम्झिरहन हामीलाई झन्झटिलो लाग्ने भएर सजिलो पासवर्ड प्रयोग गर्छौं । यस्तो परिस्थितिमा तपाईंको एउटा कुनै एकाउन्ट ह्याक हु“दा अन्य एकाउन्ट पनि ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
इन्टरनेट सेक्युरिटी कम्पनी ‘रिगो टेक्नोलोजी’ का सरोज लामिछानेले केही पहिले ‘डार्क वेब’मा सार्वजनिक भएका पासवर्डको अध्ययन गर्दा आश्चर्यजनक नतिजा फेला पारेका थिए । नेपालमा रहेका क्लब फुटबल फ्यानहरूले क्लबको नाम पासवर्डमा राखेको देखियो । जस्तो कि लिभरपुल फुटबल क्लबका करिब ३३ सय फ्यानले ‘लिभरपुल’ भनेर पासवर्ड राखेका थिए । यसले के देखाउँछ भने प्रयोगकर्ताहरू आफूलाई मनपर्ने कुरा, सम्झिरहने शब्द नै पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्छन् । अतः प्रयोगकर्ताले बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
सामान्यतया अंक, साना तथा ठूला अंग्रेजी अक्षर तथा स्पेसल क्यारेक्टरहरू जोडेर बनाइएको पासवर्ड बलियो हुन्छ । शब्दकोशमा नभेटिने र चलनचल्तीमा नआउने शब्दहरू नै पासवर्डका लागि उत्तम हुन्छन् । उदाहरणका लागि ‘नम्बर १ बस उड्यो’– यसलाई अंग्रेजी साना ठूला अक्षर, अंक तथा स्पेसल क्यारेक्टरहरू राखेर पासवर्ड बनाउने हो भने निकै बलियो हुन्छ ।
सम्झनुपर्ने अर्को कुराचाहिँ, आफ्नो एकाउन्टको पासवर्ड अरूलाई कहिल्यै पनि सेयर गर्नु हु“दैन । जतिसुकै नजिकको साथी होस् वा विश्वासिलो मित्र, पासवर्डलाई भित्री वस्त्र मानेर र आफ्ना लागि मात्रै हो भनेर आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै काम विशेषले पासवर्ड सेयर गर्नुपर्ने भयो भने, काम सकिनेबित्तिकै पासवर्ड परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ । सामान्यतः ३–३ महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
जस्तो– फेसबुकमा सेक्युरिटी सेटिङमा जानुभयो भने त्यहाँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अप्सन हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपार्इंले हरेकपटक फेसबुकमा लग–इन गर्दा, दोस्रो कोड पनि माग्छ, जुन तपाईंसँग मात्र हुन्छ । भन्नुको मतलब त्यो सर्भिस अन गरेपछि तपाईंको छनोटअनुसार दोस्रो कोड तपाईंको मोबाइलमा एसएमएसको रूपमा आउन सक्छ वा तपाईंले अर्को एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा कोडहरू लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईंले लग–इन गर्न पासवर्ड मात्रै राखेर हुन्न, अर्को कोड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यो पढिरहँदा झन्झटिलो झैँ सुनिए पनि यो एकदमै सरल र सहज छ ।
के–कति कुरा राख्न उचित हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा म के–कति भन्न सक्छु वा देखाउन सक्छु, त्यति मात्रै कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्छ । आफूले केही राख्नु वा लेख्नुपूर्व एकपटक सोच्न जरुरी छ, यो कसका लागि राख्दै छु, यो राख्न ठीक छ कि छैन, आफैँले सेन्सरसिप गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । किनकि सबै कुरा सबैका लागि योग्य हुन्नन् । कसैबारे टिप्पणी गर्दा प्रत्यक्ष भेट्दा जति भन्न सकिन्छ, त्यति नै लेखेर आत्मानुशासन कायम गर्न सकिन्छ । गोपनीयताकै कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालले तपाईंको उमेर, शिक्षादीक्षा, पेसा सबै कुरा सोध्छ । अब तपाईंलाई कति, केसम्म राख्दा ठीक हुन्छ, किन सामाजिक सञ्जाल चलाउ“दै छु भनेर आफैँले आफैँलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
जतिसुकै नजिकको साथी होस् वा विश्वासिलो मित्र, पासवर्डलाई भित्री वस्त्र मानेर र
आफ्ना लागि मात्रै हो भनेर आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ
फलानाको नाममा खाता खोलेर झुक्यायो, च्याटबाट लाखौँ ठगी आदि समाचार सुनिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरी प्रयोगकर्ता छन् । कतिले यसलाई ठगी गर्ने माध्यम पनि बनाइरहेका छन् । हामी अलिकति चनाखो हुने हो भने यस्ता घटना टार्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको रमाइलो पक्ष भनेको, कहिल्यै नभेटिएका, नदेखिएका मान्छेसँग सञ्जालमा भेट्न सकिन्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा नचिनेका साथीहरूको ‘रिक्वेस्ट’ आउँदा एकपटक अनुसन्धान गरेर, को मान्छे हो भन्ने बुझेर मात्रै सम्बन्ध गा“स्दा सजिलो हुन्छ । फेसबुकको हकमा त आफ्ना साथीका साथीबाहेकले रिक्वेस्ट पठाउनै नमिल्ने पनि बनाउन सकिन्छ । कसैले च्याटमा म्यासेज पठाइरहन्छ भने ब्लक गर्न सकिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएपमा देखिएका, भेटिएका, पढिएका सबै कुरा सही हुन्नन् भनेर प्रयोगकर्ताले बुझ्नु पनि जरुरी छ ।
एकजना चर्चित सेलिब्रेटीको सात लाखभन्दा धेरै फलोअर भएको फेसबुक पेज दुई महिनाअघि
ह्याक भयो । उनलाई बलियो पासवर्ड, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन आदि विविध कुरा थाहा थियो । उनको पेजमा धेरै लाइक भएका कारण एकजनाले उनलाई म्यासेजमा बिजनेस प्रपोजल राख्यो । पेजमा पोस्ट गरेबापत रकम लिने–दिने कुरा पनि भयो । उनले कस्तो किसिमको पोस्ट हो भनेर सोधिनभ्याउँदै उताबाट एउटा लिंक आयो । लिंक क्लिक गरेर उसले भनेअनुसार गरेपछि पेज ह्याकरको कब्जामा गयो । पछि फेसबुकसँग सम्पर्क गरेर बल्लबल्ल ह्याक भएको पेज फिर्ता ल्याइयो ।
मानौँ तपाईंलाई कसैले म्यासेजमा तपाईंको एकाउन्ट ह्याक भएको छ, पासवर्ड परिवर्तन गर्नुस् भनेर लिंक पठायो रे । तपार्इंले त्यो लिंक खोल्दा, दुरुस्तै फेसबुकझैँ देखिन्छ । अनि हतारहतार तपाईं आफ्नो एकाउन्ट जोगाउन युजरनेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ । तर, त्यो फेसबुक नभई, फेसबुक जस्तै देखिने अर्को वेबसाइट हुन सक्छ । ह्याकरले सजिलै तपाईंको फेसबुकको युजरनेम र पासवर्ड पाउँछ र सजिलै ह्याक गर्न सक्छ । यो उदाहरण दिएर सबै कुरामा सशंकित हुनुपर्छ भन्न खोजेको भने होइन है । तर, सामाजिक सञ्जाल वा जुनसुकै साइट वा इमेल चलाउँदा शंकास्पद लिंक क्लिक नगर्नु भन्न खोजेको मात्र हो ।
पासवर्ड, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, एप्सलगायत यावत् कुराका लागि अहिल्यै आफूले चलाउने एकाउन्टको सेक्युरिटी चेक गरिहाल्नुस् । फेसबुक, गुगल, ट्विटरलगायत सबैको सेटिङबाट यी कुरा समीक्षा गर्न सकिन्छ । कमजोर पासवर्ड छ भने नया“ बलियो पासवर्ड राख्नुस् । टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राखिएको छैन भने राखिहाल्नुस् । आफूले यी साइट कुन–कुन डिभाइस (मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट) बाट चलाउनुभएको छ, हेर्नुहोस् । कुनै शंकास्पद डिभाइस, स्थान देखा परे त्यसलाई हटाउनुस् । नचिनेका वा नचाहिने एप्स हटाइदिनुस् र सुरक्षित रहनुस् ।
(आकार अनिल सोसल मिडिया तथा प्रविधिविज्ञ हुन् । उनी आकार पोस्ट डटकम ब्लगमा इन्टरनेट तथा सोसल मिडियाबारे लेख्ने गर्छन् ।)
Tweet to @aakarpost
#आकार अनिल #सामाजिक सञ्जाल